कठै! पैसाको लागि बुहारीले सासुलाई मार्ने प्रयास। छोरीले बचाइन् आमा(भिडियो सहित) - Mitho Khabar
June 23, 2022 mithokhabarLeaveaComment on कठै! पैसाको लागि बुहारीले सासुलाई मार्ने प्रयास। छोरीले बचाइन् आमा(भिडियो सहित)
आमाको टाउको बाट रगत नै रगत बगिरहेको अवस्थामा छोरीले भेटेको बताएकी छिन्। ती पीडित वृद्धको श्रीमानको अस्पातलमा टाउको को अपरेसन भइरहेको अवस्थामा छोरा आफ्नु बुबा सँग व्यस्त रहँदा यता बुहारीले भने सासु एकलै भयेको मौका छोपेर पिटेको भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।
झापाको दमक नगरपालिका वर्ड नम्बर नौ मा आफ्नै बुहारीले कोही नभएको मौका छोपेर ६३ वर्षीय वृद्ध सासु माथि कुटपिट गरी ज् या न नै लिएको प्रयास गरिएको कुरा यतिबेला बाहिर आएको छ। यदि यस कुराको प्रमाण हुने थिएन भने कसले त्यस्तो गर्यो भन्ने कसैलाई थाहा हुने थिएन।
पीडित वृद्ध महिलाको छोरीको भनाइ यस्तो छ,’ आमा एकदम डराउनु भएको थियो केही होस् चेत नै थिएन आमाको। टाउको बाट पुरै रगत नै रगत बगिरहेको अवस्था हुँदा शरीर नै रगतमा डुबेको जस्तो देखिन्थ्यो मैले आमालाई हेर्दा।’**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
‘चोट भनेको टाउको लागेको छ अनि शरीर ढाड भरि नैं नील डाम नै नील डाम देखिन्थ्यो। अस्पातलमा डाक्टरले घाँटीको दुईओटा हड्डी पनि भाँचिएको छ भनेको छ एमआरआई गराउँदा। घाँटी न्याक्ने क्रममा आमाको घाँटीको हड्डी भाँचिएको हो पक्कै पनि।’
कठै!! यात्रुवाहक बसमा ए”सिड पो”खिँदा मोरङमा पाँच जना घा”इते,हेर्नुहोस